Satroka mpamosavy azo hanina - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Satroka mpamosavy azo fihinana
Appetizers33 minitraOlona 8460 kaloria
Ity dia fomba fahandro mamy sy mahafinaritra hatao amin'ny andro Halloween anao. Tsy maintsy manao crème matsiro izay ho tsara mba hameno ny sasany gilasy.
Ireo cones ireo dia ireo izay hanompo antsika amin'ny ampahany amin'ny satroka ary miaraka amin'ny cookie dia afaka mamita ny endrika tiantsika isika. Amin'ny sôkôla sy faharetana kely dia afaka vitantsika tsara izany.
Farany hampiasa ilay fondant handravaka izany satroka mpamosavy izany izahay, noho izany dia hanana tsindrin-tsakafo mahafinaritra be ianao miaraka amina tampoka sôkôla mahafinaritra ao anatiny. Manantena aho fa mankafy izany ianao.
1 Satroka mpamosavy azo fihinana
Ireo satroka mpamosavy ireo dia misy tsy ampoizina feno sôkôla amin'ny cones wafer. Ny fotony dia vita amin'ny mofomamy sôkôla mba hanaovana endrika
Karazan-tsakafo: mpamatsy sakafo
Fotoana fiomanana: 30M
Fotoana hiketrehana: 3M
300 g ny karazana fromazy fanosotra ao Philadelphia
Dibera malefaka 150 g
80 g vovoka kakaô tsy mamy
Ronono iray sotro fihinanana 2 sotro fihinanana
8 waffle cones ho an'ny gilasy
Mofomamy 8 lehibe sy manify, raha ny ahy dia nampiasa oatmeal aho
fondant mainty sy fotsy
250 g ny sôkôla mainty manokana ho an'ny confectionery
Menaka tanamasoandro 3 sotro fihinanana
Manomboka amin'ny fanomanana ny crème famenoana ireo kesika. Ao amin'ny Thermomix dia ampiana ny fromazy crème 300 g sy ny dibera malefaka 150 g. Mandrindra izany mandritra ny fotoana 2 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 2.
Ampianay vovoka kakaô 80 g, ny ronono roa tablespoons ary ny sotrokely fihinana vanila. Namindra indray izahay nandritra ny 1 minitra amin'ny hafainganana 2.
Vitantsika ny manampy siramamy 220 g ary afangaro izany 2 minitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny fametahana.
Maka ny cones izahay ary mametraka azy ireo ao anaty vera avo mba hijoro hatrany. Fenoy ny crème sôkôla efa nomaninay izy ireo ary apetraka ao anaty vata fampangatsiahana.
Manadio ny veranay Thermomix izahay ary manampy ny sôkôla hitsonika sy ny diloilo tanamasoandro telo sotro. Mandamina izany mandritra ny fotoana 3 minitra amin'ny 90 ° amin'ny hafainganana 1,5. Rehefa levona dia apetraka ao anaty vilia baolina.
Manomana ny ambonin`ny izay afaka mamela ny cookies sy ny cones nohosorana sôkôla. Maka ny cookies isika, atsoboka ao anaty sôkôla ary apetraka ho maina. Toy izany koa no ataontsika amin'ireo turbinates, ny tendrony ambony ihany no alentika dia apetrantsika ambony ambany izy ireo mba ho maina ny sôkôla. Afaka manafaingana ny fanamainana isika amin'ny fametrahana azy ao anaty vata fampangatsiahana.
Raisinay ny vavan'ny turbinate ary atsobika ao anaty sôkôla ary avy eo ampianay amin'ny cookies sôkôla. Avelantsika ho maina mba hamehezana ny endrika satroka.
Hamarana ny satroka isika amin'ny fametrahana fondant mainty manodidina ny satroka. Hamboarinay koa ny buckle fotsy kely izay hofongaranay amin'ny antsy. Apetrakay eo an-tampon'ilay fanerena mainty ilay izy mba hiraikitra.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Postres
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Satroka mpamosavy azo fihinana
Mitsimoka sy karaoty voadaroka i Bruxelles
Puree exotic misy voanio